रोचक प्रसंग Archives - Samasta Khabar
Category: रोचक प्रसंग
एक व्यक्तिले दुई ठुला कम्पनी फेसबुक र गूगलको अर्बौ रुपैयाँ ठगि गरे
29th March 2019 29th March 2019 avigo
संसारकै दुई ठुला कम्पनी फेसबुक र गूगलको एक अर्ब भन्दा धेरै रकम मात्र एक व्यक्तिले चुना लगाइदिएका छन् । ल्यात्वियाका एक व्यक्तिले फेसबुक र गूगलबाट १२२ मिलियन डलर ठगि गरेका छन् । बोइङ्ग बोइङ्ग को एक रिपोर्ट अनुसार ल्यात्वियामा बसोबास गर्दै आइरहेका एवलादस नाम गरेका व्यक्तिले गूगल देखि २३ मिलियन डलर र फेसबुक देखि ९९ मिलियन डलर लिएका छन्। रिपोर्टका अनुसार ती व्यक्तिले ठगि गरेर फेसबुक र गूगल देखि पैसा लिएका हुन् । अब तपाई आफै भन्नुहोस यो फेसबुकको लापरबाही हो या अरु केहि । यो ठगि २०१३ देखि २०१५…
रोचक प्रसंगLeaveacomment
सिंहले आक्रमण गर्दा युवकले सिंहलाई नै मारिदिए
एउटा अचम्मको एवम् रोचक घटना अमेरिकाको उत्तरी कोलोराडोमा घटेको सार्वजनिक भएको छ । सिंहले आक्रमण गरि कुनै मानिसको मृत्यु भएको वा घाइते भएको त हामीले सुन्दै आएका छौँ । तर कोलोराडोमा भने ठ्याक्कै उल्टो नै भइदियो । सिंहले एक युवकमाथि हमला गर्न खोज्दा आफ्नो मृत्यु निम्त्याएको छ। कोलोराडो पार्क्स एण्ड वाइल्डलाइफका अनुसार युवक गत सोमबार फोर्ट कलिन्स नजिकै हर्स ब्लूटूथ माउन्टेन ओपन स्पेसमा एक्लै दौडिरहेका थिए त्यति नै बेला सिंहले पछाडिबाट हमला गर्यो । सिंहसँग संघर्षका बेला युवकको अनुहार र हातमा चोट लाग्यो । यति हुँदा हुँदै पनि उनी सिंहलाई…
जीवनमा कस्ता कुरा गोप्य राख्नुपर्छ ? सफल अनि सुखी जीवनशैली प्राप्त गर्न
हामीले जीवनमा जानी नजानी थुप्रै क्रियाकलापहरु गर्छाँै । समय र परिस्थिति अनुसार कुराहरु खुलाउनुपर्ने र लुकाउनुपर्ने (गोप्य राख्नुपर्ने) हुन्छ । हामी कतिपय खोल्न नपर्ने कुराहरु प्वाक्क भनिदिन्छौँ । तर खासमा धेरै महत्वपूर्ण कुराहरु गोप्य राख्नुपर्ने हुनसक्छ । चाणक्यको जीवन दर्शनलाई पूर्विय दर्शनमा एक महत्वपूर्ण दर्शनको रुपमा लिइन्छ । उनी एक प्राचीन कालका निकै नै महान दार्शनिक तथा अर्थशास्त्री हुन् । तिनै महान व्यक्तिले भनेका जीवनमा गोप्य राख्नुपर्ने केही महत्वपूर्ण कुराहरु यस्ता छन् : पहिलो कुरा चाणक्य नीतिका अनुसार पुरुषले गोप्य राख्नुपर्ने पहिलो कुरा धनको लाभ र हानीको बारेमा कसैलाई पनि…
कहिल्यै घरमा नल्याउनुस् यी ३ तस्बीर
30th January 2019 avigo
घर सजाउने कुरामा अधिकांश मानिसहरु निकै नै सौखिन हुन्छन् । कोही प्रिन्टेड तस्बीर ल्याउने गर्छन् त कोही चित्रकला ल्याएर राख्ने गर्छन् । सबै तस्बीरहरु सजाउन योग्य हुन्छन् भन्ने हुँदैन । कुनै तस्बीरले सकारात्मक उर्जा पैदा गराउँछ भने कुनैले हरेक मोडमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने गर्दछ । घर सजाउने मामलामा जहिले पनि वास्तुशास्त्र अनुसारको घर शुभ बनाउने कुरा हेनुपर्दछ । हरेक सुन्दर तस्बीरले घर सुन्दर बनाउन सक्छ तर उचित साथै वास्तुशास्त्रअनुसार ठिक छैन भने सो तस्बीर घरमा सजाउनु हुँदैन । ती तीन तस्बीर बारे * जसमा महाभारत युद्धको दृश्य कैद भएको हुन्छ…
सरकारले नै गरिदिने विवाह, गर गहनाको व्यवस्था पनि सरकारले !
आफ्नो विवाहको लागि चाहिने सबै खर्च पुराउनका लागि परिवारका सबै जुटेका हुन्छन् । आफ्नो कमाइमा बिहे गर्ने सपना बोक्ने युवायुवती हुन्छन् जसको उमेर पुगेतापनि करिअर बनाउने अनि पैसा कमाएर गर्ने भन्छन् । तर दक्षिण एसियामा एउटा यस्तो देश छ जहाँ विवाह सरकारले नै गरिदिने गरेको छ । सो विवाह सामुहिक रुपमा गरिन्छ । अंग्रेजी नयाँ वर्षको अघि गरिने यस्तो सामूहिक विवाह लोकप्रिय हुँदै गएको छ । दुलाहाले दुलहीलाई विवाहमा दिनुपर्ने सुनको गहना सरकारले नै व्यवस्था गरिदिएपछि यो विवाहले लोकप्रियता पाएको हो । प्रत्येक अंग्रेजी वर्षको अन्तिम दिन सरकारले जकार्ता सहरमा…
साउदी अरबमा महिलाले आफ्नो बुवाको कुरा नमान्दा जेल जानुपर्ने । हेर्नहोस् अचम्म पार्ने अरु कानुन :
8th January 2019 8th January 2019 avigo
साउदी अरबमा महिलाहरु माथि यस्ता कानुनहरु छन् जुन सुन्दा तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ । केही समय अगाडी साउदीमा महिलाले गाडी चलाउन पाउँदैनथे । उनीहरुले कुनै खेल पनि खेल्न पाउँदैनथे र रंगशालामा गएर कुनै खेल पनि हेर्न पनि रोक लगाइन्थ्यो । अहिले पनि यस्ता रोकहरु हटाउँदै साउदी अरबीयाले आफ्नो देशका महिलाहरुलाई केही राहत भने दिएको छ । तर अझैँ पनि केही नियमहरु यस्ता छन् जसका कारण महिलाहरु आफ्नो खुशी खुल्ला जीवन जिउन पाउँदैनन् । साउदीमा “male guardianship system” पुरुष अभिभावकत्व प्रणाली लागू गरिएको छ जसमा एउटा महिलाको जीवनको फैसला महिलाको बाबु,…
जाडो मौसम बारे आश्चर्य तथा रमाइला तथ्यहरु । अमेरीकाका सडकहरुमा जाडो मौसममा २२ मिलियन टन …
3rd January 2019 avigo
हुन त मौसम बदली अनुसार हामीले झट्ट ख्याल नगर्ने तर आश्चर्य लाग्ने कुराहरु धेरै नै हुन्छन् । त्यही आश्चर्यता बिच जाडो मौसमका पनि केही रमाइला तथ्यहरु छन् । १. जाडो मौसममा पृथ्वी सूर्यको नजिक पुग्ने गर्दछ । जनवरी महिनामा आफ्नो अर्बिटको एउटा बिन्दुमा पुग्दछ जुन सूर्यको नजिक पर्दछ । हुन त यसले मौसम बदलीमा त्यस्तो केही प्रभाव पार्ने त होइन तर पनि यो तथ्य केही रोचक छ ताकि हामीलाई यस्तो भ्रममा पारिदिन्छ कि पृथ्वी सूर्यको नजिक पुग्ने भए चिसोको साटो तातो वा गर्मी हुनुपर्ने हो । २. प्रत्येक वर्षको जाडो…
उमेर २०, सम्पत्ति २० हजार करोड !
निकै चाखलाग्दो कुरा के कोही मानिससँग मात्र २० वर्षको उमेरमा २० हजार करोडको सम्पत्ति हुन सक्ला र तपाई हाम्रो उमेरमा यो सम्पत्ति हुँदो हो त महलमा राजकुमारको रुपमा आलीशन जिन्दगी विताउछौँ होला । यो कथा धेरै परको देशको होइन । भारत जयपुरका राजा पद्यनाभ सिंहको जीवनशैली केही रोचक छ । उनी राजकुमारी दिया कुमारी र नरेन्द्र सिंहका छोरा हुन् र जयपुरका सबैभन्दा युवा राजकुमार पनि । उनी घुम्नका सौखिन छन् त्यसैले धेरै पैसा पनि घुम्नामा नै खर्च गर्दछन् । उनी मोडल, पोलो प्लेयर साथै ट्राभलर हुन् । आफ्ना हजुरबुवा सवाईमान…